Dengrove dia manampy mpanatontosa DC / DC solosaina avy ao amin'ny Recom - Infinity-Electronic
HomeNewsDengrove dia manampy mpanatontosa DC / DC solosaina avy ao amin'ny Recom
Izy ireo dia natokana ho an'ny fampiharana izay mitaky density ambony sy fahaiza-manao avo lenta ary manam-pahefana avy amin'ny 3.3W hatramin'ny 30W.
Izy ireo dia manaraka ny doka indostrialy DOSA (12.19 x 12.19mm) ary misy amin'ny ambaratongam-pamokarana nomerika 1.0A, 2.0A, 3.0A, na 6.0A. Ny fampiasana fanaraha-maso IC sy plastika misy teboka maromaro dia lazaina ho vokatr'izany eo amin'ny lanjan'ny herinaratra ho an'ny 800W /3 ary koa mamela ny fampiasana amin'ny fampihetseham-panoherana.
Ny mahomby indrindra dia eo anelanelan'ny 97-99%, ho an'ny fiasana amin'ny entana feno amin'ny hafanana manodidina ny temperatures hatramin'ny 107 ° C raha tsy mafana ny rivotra. Ny mpanatontosa dia afangarona amin'ny metaly afaka miaraka amin'ny fiaramanidina midadasika ho an'ny fiarovana enina amin'ny sisin-dalana ho an'ny fandefasana rotsak'aina, hoy ny mpaninjara. Izy ireo koa dia mifanaraka amin'ny EN 55032.
Ny toetra hafa dia ny fanaraha-maso henjana sy ny safidy manara-penitra, ny tsipika ho an'ny herinaratra-tsara, ny fanaraha-maso ary ny famaranana amin'ny alàlan'ny famoahana programa dia miakatra ny fotoana hanatsorana ireo mpanodina power-ups amin'ny fotoana iray na amin'ny dingana voafaritra. Ny latsa-pitenenana nomerika 3.3V na 5.0V dia azo alamina na ampiasaina amin'ny fampiasana solosaina tokana. Misy ihany koa ny fanaraha-maso fanamoriana malefaka.
Ny mpaninjara ihany koa dia manamboatra boaty fanamarinana Recom ho an'ny lahatahiry RPM ho an'ny fitsapana, fampandrosoana ary ny prototyping.
Ireo converter DC-DC dia efa misy amin'izao fotoana izao ho toy ny tontolon'ny fitrandrahana miaraka amin'ny fifandraisana an-tanety (LGA).